WAR CUSUB: Ciidamada Ahlu Sunna oo dhaq-dhaqaaq Ciidan ka wada Dhuusamareeb & Jawiga oo.. | HalQaran.com
WAR CUSUB: Ciidamada Ahlu Sunna oo dhaq-dhaqaaq Ciidan ka wada Dhuusamareeb & Jawiga oo..
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ciidamada Ahlu Sunna ee dhawaan lagu biiriyay Ciidanka dowladda ayaa lagu soo waramayaa inay dhaq dhaqaaq Ciidan ka wadaan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Sida ay ku soo warramayaan weriyeyaasha ku sugan Magaalada Dhuusamareeb in saaka illaa galabtan waxa ay ciidamada wadeen dhaqdhaqaaqa Ciidan ee la xiriira Magaalada gudaheeda.
Ciidankaan ayaa la sheegayaa in qorshahooda uu yahay la wareegista ammaanka guud ee Magaalada gudaheeda, kadib markii madaxda Ahlu Sunna shaki ka muujiyeen dhaqangalka heshiiskii dowladda ay la gashay Maamulkii Ahlu Sunna.
Ciidamadii Ahlu Sunna ee dhawaan la sheegay in la qarameeyay ayaa lagu arkayaa Xaafadaha kala duwan ee Magaalada Dhuusamareeb, waxaana arrintaasi dareen cabsi leh ku abuurtay Bulshada ku nool Magaalada.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Ciidamada Ahlu Sunna ay doonayaan inay la wareegaan ammaanka guud ee Dhuusamareeb & Garoonka Diyaaradaha, halkaasi oo iminka ay ku sugan yihiin Ciidamada Danab ee amniga Garoonka lagu wareejiyay xilli hore.
Madaxda Ahlu Sunna ayaa shaki wayn ka qaba dhaqan galka heshiiskii ay la galeen madaxda dowladda Federalka Somaliya.
Ciidamada Ahlu Sunna
Dhaq dhaqaaq ciidan